I-Best Thread bit Screw drill yoMvelisi kunye neFektri | Gimarpol
Silandela umgaqo wolawulo we "Umgangatho ngowona mgangatho uphezulu, iNkampani yeyona nto iphambili, iMeko yeyokuqala", kwaye siyakwenza ngokunyanisekileyo kwaye sabelane ngempumelelo kubo bonke abathengi beemveliso ezitsha ezishushu China 5/8 ″ -11 Thread Diamond Core Drill Bits for Stone (JL-DC5 / 8), sinamava angaphezulu kweminyaka engama-20 kunye nolu shishino, kwaye ukuthengisa kwethu imveliso kufanelekile ngokufanelekileyo. Siza kukubonelela ngezona zimvo zibalaseleyo zokuhlangabezana neemfuno zeemveliso zakho. Naziphi na iingxaki, zize kuthi!
Iimveliso ezitsha ezishushu China Diamond Core Drill, Core Drill Bits, Sinikela ingqalelo enkulu kwinkonzo yabathengi, kwaye siyabazisa bonke abathengi. Sigcine igama elomeleleyo kushishino iminyaka emininzi. Sinyanisekile kwaye sisebenza ekwakheni ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi bethu.
Iqhosha le-Gimarpol lokucofa iqhosha lobungakanani obuvela kwi-33mm-178mm, kubandakanya uhlobo lomsonto H25, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ED58 njl., Kwiintlobo zeqhosha lesitshixo, ukubuyisela iqhosha kancinci, ukubuyisela iqhosha kancinci, ukulahla indawo yokubuyisela iqhosha elincinci.
Ubume beqhosha lamaqhosha ethu e-spherical, ballistic, edibeneyo kubathengi ukuba bakhethe.
Amaqhosha anokuba sishushu sokufaka emzimbeni kwaye adityaniswe nomzimba. Ngentando iyafumaneka.
1. Umgangatho ophezulu
3. Ukusebenza okuphezulu
Le bit iqhosha lisetyenziswa ngokubanzi ukuba kusombiwa iliwa, imingxuma ukuqhumisa kunye neminye imisebenzi zokomba emigodini, imigodi yamalahle,
ulwakhiwo lwendlela kunye nedama kunye nezinye iiprojekthi ezifanayo.
Ukubhola kwebhentshi T45
Qhuba kancinci Ububanzi Ububanzi be-NoXbutton Umngxunya wokugungxula Malunga nobunzima (kg) I-P / N.
mm intshi Ngaphambili Ukulinganisa Angle Ngaphambili Icala
Iqhosha Retrac isuntswana Amaqhosha angqukuva
iqhosha kancinci 70 2.75 4 × 11 8 × 11 40 ° 2 - 2.3 1431-70T45-411 / 811-45-QYK5
70 2.75 3 × 11, 1 × 9 6 × 11 35 ° 3 - 2.2 I-1433-70T45-411 / 611-45-QYK5
89 3.5 4 × 13 8 × 13 40 ° 2 - 4.6 I-1431-89T45-413 / 813-45-QYK5
102 4 I-3 × 13,2 × 13 6 × 14 35 ° 3 1 4.5 1433-102T45-513 / 614-45-QYK5
70 2.75 3 × 11, 1 × 9 6 × 11 35 ° 3 - 2.2 I-1433-70T45-411 / 611-45-YK5
89 3.5 4 × 11, 1 × 11 8 × 12 35 ° 4 - 4.6 I-1433-89T45-511 / 812-45-YK5
I-Q7: Ngaba singatshintshela kumanqaku ethu kwiqhosha elincinci?
Ewe, sinokuphosa uphawu lwenkampani yakho kwiqhosha leqhosha (Ngaphandle kwesampulu yoku-odola)
I-Q8: Ngaba unayo inkonzo yasemva kokuthengisa kunye nenkonzo yewaranti?
Nayiphi na umgangatho okanye ubungakanani ingxaki yakuba iqinisekisiwe, siya kukubuyekeza ngokufanayo. Nawuphi na umbuzo okanye ingxaki siya kukuphendula ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
I-Q9: Ngaba ndingayithemba inkampani yakho?
Inkampani yethu iqinisekisiwe ngurhulumente wase-China, kwaye yaqinisekiswa yi-Ali baba Assurance Trade. Ukubuyiselwa kwemali eyi-100 yexabiso lesiQinisekiso soRhwebo .U-baba baba unokuqinisekisa ukuba nihlawule nonke. Myalelo nje ovela e-US!
Okulandelayo: Kuboba kancinci Anchor bit